Vakadzi Polarized Sunglasses Hyde Green / Nhema - Hanukeii
Iko kuunganidzwa kwemagirazi kwakazvarwa mune inoyevedza nzira ye California Hyde mugwagwa. Mufananidzo wemugwagwa unoonekwa kubva kumusoro unoramba uripo muma retinas edu, gungwa, rakajeka uye bhuruu kumashure, denga rakajeka uye funicular iri kusvika kwatiri.
Takamira, tichitarisa uyu mugwagwa uri mukati memwoyo weSan Francisco, tinofunga nezve huwandu hwemabhuku uye mabhaisikopo akafamba neguta; kubva murudo uye chakavanzika nyaya pakati Kim Novak naJimmy Stewart muVertigo, kune hukama hwepedyo hwemhuri pakati paAnne Hathaway naJulie Andrews muPrincess neSurprise.
Zvakaitika kwatiri ipapo; Wadii kugadzira magirazi ezuva ane hunhu hwemugwagwa wedu wepaguta unodakadza hunyanzvi uye dhizaini? Yedu Hyde muunganidzwa inotora uye inoratidza iwo mavara eiyo funicular, yezvivakwa zvakakomberedza, pier iyo inoratidza kuti iyo mainland yasvika kumagumo kutanga gungwa, uye nemazuva ane zuva apo zuva rinotichemera. Ngatitorei magirazi edu muhomwe. Maitiro eiyo furemu anotsvaga yakashongedzwa uye yakasvinwa dhizaini, yakashongedzwa nemupendero wakatarwa munzvimbo dzepamusoro dzemagirazi anotsanangura chimiro chechiso, achirebesa nekuchinjisa, kuitira kuti chero munhu anochipfeka anzwe kuti vari kufamba pamusoro Golden Gate Bridge, kana kukwazisa veko kubva kuHyde Street funicular.